चितवन । भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बन्ने भएको छ । आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको आकस्मिक कक्ष बनाउन लागिएको हो ।
२०२० सालमा बनेको अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा जम्मा १० शय्या क्षमता रहेको छ । समयअनुसार बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखेर नयाँ भवन बनाउन लागिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । अब बन्ने आकस्मिक कक्षमा ५० शय्या रहनेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ९ करोड लागतमा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । हाल बोलपत्रमा आकस्मिक कक्षका लागि भुइँतला मात्रै बनाइने भए पनि आगामी वर्ष थप दुई तला बनाउन मिल्ने गरी नक्सांकन गरिएको छ । माथिल्लो तलामा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
आकस्मिक कक्षमा ट्रमा सेन्टरसहित शल्यक्रिया कक्षसमेत रहने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आकस्मिक कक्ष बनेपछि शय्या अभावमा बिरामी बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहँदैन,’ उनले भने । आकस्मिक कक्षका परीक्षणका उपकरणसहित बिरामीलाई सबै सुविधा त्यसैभित्र हुने उनले बताए । बिरामी आएलगत्तै जटिलताका हिसाबले छुट्याएर बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. जगन्नाथ तिवारीका अनुसार आकस्मिक कक्षमा वार्षिक ४० हजार हाराहारी बिरामी आउने गर्दछन् । शय्या थप गरेसँगै यो संख्या बढ्ने उनले बताए । ‘ठूलो दुर्घटना हुँदा आकस्मिक रूपमा धेरै बिरामी राखेर उपचार गर्न सकिएको थिएन । नयाँ भवन बनेसँगै अब त्यो सम्भव छ,’ उनले भने । संघीय राजधानी भित्रिने र बाहिरिने पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत धेरै सडक सञ्जालसँग जोडिएकाले चितवनमा दुर्घटना धेरै हुने गर्दछन् । सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सानो र सुविधा नहुँदा अधिकांश दुर्घटनाका घाइते निजी मेडिकल कलेजमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको प्रशासनिक भवनको पछाडि रहेको खाली ठाउँमा आकस्मिक भवन बनाइँदै छ । यहाँ देशका १९ जिल्लाबाट बिरामी उपचार गर्न आउने गरेको बताइएको छ । रासस
चितवन पुष्प व्यवसायीको अध्यक्षमा सापकोटा चयन[२०७७ फागुन, १६]